February 4, 2018 – Rohingya Language Foundation
Learn Rohingya the Easy Way Lesson A19 Pronoun: << First Person (I) >> 1. Añí = I 2. Añára = We << Second Person (II) >> 3. Tuñí = You (also Oñne ,Tui ) 4. Tuáñra = You (all) << Third Person (III) >> 5. Ite = He (also Íte, Ibá, Íba ,Te,Taáñi ) 6. […]
ရိုဟင်ဂျာ ဂျီနိုဆိုက် (Genocide) အထောက်အထားတွေက ရခိုင်နဲ့ ဗမာ နိုင်ငံရေး အားပြိုင်ဖို့ ဖြစ်လာလေမလား? ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ အသတ်ခံရတာ၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာ၊ မီးရှို့ခံရတာတွေ စတဲ့ အထောက်အထား တော်တော်များများက ရခိုင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရှိတယ်။ မရှိခဲ့ရင်လည်း ရှိအောင် စုနေကြတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင် ကိုဖမ်းဆီးတော့မယ့်ဆဲဆဲမှာ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ မြင်ခဲ့ရတယ်။ ရခိုင်တွေဘက်က ရှိသမျှ ထုတ်ပြလိုက်ရင် ဗမာအစိုးရ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး တန်းရောက်သွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အခုလည်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူဒမ်ဖာရာ (ဂူတာပြင်) ကျေးရွာက အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှပ်ထားတဲ့ ကျင်း ၅ ကျင်းအကြောင်း AP သတင်းဌာနက ထုတ်ဖော်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗမာဂျီနိုဆိုက် အစိုးရကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မရှိပါဘူးဆိုပြီး ငြင်းလိုက်တယ်။ AP သတင်းကို […]